ဝါကျရေးတဲ့အခါ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိဖို့ သတိထားပါ (၃) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
၀ါကျရေးတဲ့အခါ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိဖို့ သတိထားပါ (၃)
ရှေ့မှာ ကျနော်ရေးခဲ့တာတွေက သိဖို့ (to know) တွေ ဖြစ်ပြီး အခု ဆက်ပြီးရေးမှာကတော့ လုပ်ဖို့ ( to do ) တွေ ဖြစ်ပါတယ် ၊ parallel ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလွယ်လွယ် လုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကျနော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆန်းစစ်ထုတ်နှုတ်ချက်လေးတွေ ဖြစ်လို့ အားလုံးကို ခြုံငုံမိဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူး ၊ “ကျနော်ဆိုလျင် ဒီလိုလုပ်ပါမယ်” ဆိုတာမျိုးကို မျှဝေလိုက်တဲ့သဘောပါခင်ဗျာ.. နမူနာလေးတွေနဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲ ကြည့်ကြပါစို့လား
(1.0) လိုအပ်လျင် ၀ါကျထဲက element တွေကို နေရာရွှေ့ပေးရပါမယ်
(1.1) We not only ate pizza, but also pasta. (wrong: V + N, N)
(1.2) We ATE not only pizza, but also pasta. (correct: N, N) ( ပိုနေတဲ့ ate (V) တစ်လုံးကို not only ရှေ့ ပို့လိုက်ပါတယ်)
(2.0) လိုအပ်လျင် ၀ါကျထဲက element တွေကို ဖြုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်
(2.1) She cleaned the kitchen, the bathroom, and DUSTED the living room. (wrong: N, N, V + N)
(2.2) She cleaned the kitchen, the bathroom, and the living room. (correct: N, N, N) ( dusted (V) တစ်လုံးပိုနေတာကို ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်)
(3) လိုအပ်လျင် ၀ါကျထဲကို element တွေ အသစ်ထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်
(3.1) The child both wanted to ride the roller coaster and ice cream. (wrong: V + Infinitive + N, N)
(3.2) The child WANTED both to ride the roller coaster and ice cream. (wrong: Infinitive + N, N)
( wanted (V) တစ်လုံးကို ရှေ့ပို့လိုက်ပါတယ် ၊ ညီသွားပြီလား.. မညီသေးပါဘူး )
(3.3) The child wanted both to ride the roller coaster and TO EAT ice cream. (correct: Infinitive + N, Infinitive + N)
( ice cream ရဲ့ရှေ့မှာ infinitive ( to+V1) ဖြစ်တဲ့ to eat ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ် ၊ ညီသွားပါပြီ )
(4) Active voice, Passive voice စသည်ဖြင့် voice တူအောင် ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ် ၊
(4.1) I wrote the report, called the client, and THE STOREROOM WAS ORGANIZED. (wrong: V + N, V+ N, N + V)
(4.2) I wrote the report, called the client, and ORGANIZED THE STOREROOM. (correct: V + N, V + N, V + N)
(ဒီစာကြောင်းမှာ organize ဆိုတာက အစီအစဉ်ကျအောင် လုပ်တာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်)
(5) Formal, informal, speaking စသည်ဖြင့် style ပြောင်းပြီးရေးလို့လည်း ရတယ်လို့ သိရပါတယ် parallel ဖြစ်တာပါပဲ
(5.1) They ate neither the apples nor the oranges. (correct, used in formal writing)
(5.2) They didn’t eat either the apples or the oranges. (correct, more common in informal writing and speaking)
(5.3) They didn’t eat the apples or the oranges. (correct, the most common in speaking)
(6) Case တွေပါလာလျင် တူအောင်ပြောင်းပေးရပါမယ်
(6.1) My friends never judge me by MY WORDS or WHAT I DID. ( my words က possessive case ဖြစ်နေပါတယ် )
(6.2) My friends never judge me by MY WORDS or MY ACTIONS. ( what I did ကို my actions နဲ့လဲလှယ်လိုက်ပါတယ် ၊ ညီသွားပါပြီ )
(7) Tense တွေကိုတော့ လုံးဝကွက်တိ တူစရာမလိုပဲ ၊ ဆက်စပ်မှုရှိနေလျင်ရပါတယ်
(7.1) He is gambling with his health, FOR he has been smoking far too long.
( ဒီမှာ Present continuous tense နဲ့ Present perfect continuous tense ကို ဆက်ထားပါတယ် )
(8) Correlative conjunction တွေထဲမှာ Not only ကို ရှေ့တင်ပြီး Not only.. but also နဲ့ ဆက်တဲ့အခါ Inversion လုပ်ပေးရပါမယ်
(8.1) Not only she will takeatest, but she will also giveapresentation. (wrong: no inversion)
(8.2) Not only will she takeatest, but she will also giveapresentation. (correct: inversion)
(9) Neither.. nor နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ S+V အတွဲတွေဖြစ်တဲ့ clause တို့ sentence တို့ကို ဆက်တာ မတွေ့ရပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မို့ ရှေ့တင်ပြီး ဆက်တဲ့အခါမှာလည်း Inversion လုပ်စရာ မလိုဘူး ဖြစ်သွားပါတယ် ၊ Parallel structure မှာတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်
(9.1) Neither man nor woman has been to Mars. (Neither + noun, Nor + noun)
မှတ်ချက်.. ဘယ်ခါကျမှ inversion လုပ်စရာလိုသလဲဆိုတော့ ရှေ့မှာ negative sentence ရှိတာကို negative statement နဲ့ လိုက်ပြီးထောက်ခံတဲ့အခါမျိုးမှာပဲ လုပ်ပေးရပါတော့တယ် Neither သို့မဟုတ် nor ကို တစ်လုံးချင်းပဲ သုံးပါတယ် ၊ တွဲလျက်မသုံးတော့ပါဘူး ။
Eg: A. I don’t like onions.
B. Neither do I. (or) Nor do I.
အခုနောက်ဆုံးမှတ်ချက်ဟာ Parallelism နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး inversion ဖက်ကိုရောက်သွားပါပြီ.. အဲလိုပဲလေ.. ကျနော်က ဟိုရောက်ဒီရောက်